Vaovao - Mandraisa anjara amin'ny fampirantiana EPS matihanina
Tao anatin'izay taona lasa izay dia nandray anjara tamin'ny fampiratiana ny milina EPS matihanina tany Jordania, Vietnam, India, Mexico ary Torkia sns isika. Nohararaotinay ny fampirantiana dia nifankahita tamina mpanjifa maro izahay izay efa nividy milina EPS taminay na dia tsy nifankahita aza, ary nahita namana vaovao marobe izay mikasa ny hanangana zavamaniry EPS vaovao. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana, azontsika atao tsara ny mahatakatra ny zavatra takian'izy ireo, mba hahazoana vahaolana mety kokoa ho azy ireo.
Anisan'ireo fitsidihan'ny mpanjifa isan-karazany, ny nahavariana ahy indrindra dia ny orinasa EPS iray any India ary ny orinasa EPS iray any Torkia. Ny orinasa EPS any India dia orinasa taloha. Mividy lasitra EPS 40-50 avy aminay isan-taona izy ireo hanamboarana vokatra fonosana isan-karazany. Ankoatr'izay dia nividy milina EPS vaovao sy kojakoja EPS avy aminay koa izy ireo. Niara-niasa nandritra ny 10 taona mahery izahay ary nanorina fisakaizana lalina. Matoky antsika tokoa izy ireo. Rehefa mila vokatra hafa avy any Shina izy ireo dia mangataka anay foana izy ireo hanome izany. Ny zavamaniry tiorka iray hafa koa dia iray amin'ireo zavamaniry EPS tranainy sy lehibe indrindra ao Torkia. Novidian'izy ireo milina 13 EPS Shape Molding Machine, 1 EPS Batch Preexpander ary 1 EPS Block Molding Machine avy aty aminay. Izy ireo dia mamokatra haingo EPS amin'ny ankapobeny, ao anatin'izany ny kofehin'ny EPS, valindrihana EPS ary tsipika haingon-trano EPS misy sarona ivelany. Ny kofehin'ny EPS miaraka amina endrika samihafa dia ampiasaina amin'ny tsipika zoro trano anatiny, ny takelaka valindrihana EPS dia ampiasaina mivantana amin'ny valindrihana trano anatiny. Ireo fitaovana haingon-trano ireo dia fenoina anaty filaminana ary aondrana matetika any amin'ny firenena eropeana sy afovoany atsinanana. Ny vokatra sasany dia fonosina anaty singa tokana na vitsivitsy miaraka amidy amidy antsinjarany. Dia dia mahafinaritra tokoa ary faly izahay fa niara-niasa tamin'ny orinasa lehibe toy izany.
Amin'ny taona 2020, noho ny virus Corona, mila manafoana ireo fampirantiana ivelan'ny Internet isika ary manova ny fifandraisana an-tserasera. WHATSAPP, WECHAT, FACEBOOK dia mamela antsika hifandray amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana mety. Na dia tsy afaka mandeha any Chine hitsidika anay aza ny mpanjifa dia afaka manao horonantsary na antso an-tsary foana izahay mba hampisehoana ny orinasa sy ny vokatra isaky ny ilaina izany. Ny fanompoana tsara ataontsika dia eo foana. Mazava ho azy, manantena am-pahatsorana izahay fa hijanona tsy ho ela ny CORONA, mba hahafahan'ny olona eran'izao tontolo izao mandeha malalaka ary afaka manafana ny toe-karena.
Fampirantiana ho an'ny indostria plastika 17 & Vietnam
Fampirantiana India 2018
Tsenan'ny varotra Shina (Torkia) 2019 any Istanbul Expo Center